Raharaha Claudine Razaimamonjy : Anatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Claudine Razaimamonjy : Anatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka
Raharaha Claudine Razaimamonjy : Anatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka
24/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nohamafisin’ny fanambarana ofisialy avy amin’ny fitondram-panjakana, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana fa tanatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka ny fikirakirana ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Mba hialana amin’ny tsaho isan-karazany momba ity raharaha ity moa no anton’izany. Ny « Charte des droits humais » dia milaza fa zon’ny olombelona rehetra ( na manan-draharaha amin’ny fitsarana, na marary, na kilemaina…) no mitsabo tena sy hotsaboina. Noho izay tsy fahasalamana teo amin-dRamatoa Claudine izay no nitsaboana azy tany Maorisy.
Ny sabotsy teo no tafaverina teto Madagasikara izy. Manan-draharaha eo amin’ny Fitsarana izy ary raha ny voalazan’ny lalàna dia misy hatrany ny mpiandry fonja miaraka aminy. Voahaja sy nohajaina hatrany izany. Porofo mivaingana izany fa voahaja hatrany ny lalàna momba ity raharaha Claudine ity. Araka ny toromarika nomen’ny mpitsabo tao Maorisy dia mila fanaraha-maso akaiky ny fahasalamany. Noho izany dia noentina tetsy amin’ny hopitaly Hjra avy hatrany izy nanohy izay fitsaboana azy izay.
Nanambara mazava ihany koa ny Governemanta, tamin’ny alalan’ity fanambarana N° 001-Mcri/M ity fa tsy raharaham-pirenena akory ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Toa ny olon-drehetra eo ambany lalàna manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana izy, ka tsy misy fanambarana andrasana avy amin’ny filoham-pirenena momba izany. Ny fampandrosoana an’i Madagasikara no vaindohan-draharahan’ny Filoham-pirenena fa tsy miditra amin’ny raharahan’ny olom-pirenena tsotra toa itony. Efa any amin’ny Fitsarana mantsy ny raharaha ka ny fitsarana tanteraka no tompon’antoka amin’izany. Ny Lalàm-panorenantsika rahateo dia mandidy ny fisaraham-pahefana eo amin’ny fitondrana mpanatanteraka sy ny fahefana mpitsara.
Tsena goavana sy moderina indrindra manerana an’i Madagasikara, na ny faritra oseanina indianina no napetraka sy notokanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao Moramanga omaly, vokatry ny fiaraha-miasa amin’ ny orinasa Ambatovy . Raha ny fanazavana azo dia ...Tohiny